မာယာများတဲ့အလင်္ကာ ဇာတ်ကားအတွက် ပရိသတ်များကို တောင်းပန်ဟု သဉ္ဇာနွယ်ဝင်းဆို
ရိုးရာလေးအသင်းဝင်ရန် User Name
ပြည်တွင်းသတင်းများနိုင်ငံရေးအထက်မြန်မာပြည်သတင်းအောက်မြန်မာပြည်သတင်းပညာရေးဘာသာရေးမှုခင်းနောက်ဆုံးသတင်းများ ငွေရှိမှ ကုသိုလ်ရတာ မဟုတ်ပါဘူး
ရှေးဟောင်းရုပ်တု တစ်ခုအတွင်း တရားထိုင်နေသည့် ဘုန်းကြီးရုပ် ခန္ဓာတွေ့ရှိ
မြို့တော်သန့်ရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ကြရန် မြန်မာ ဘောလုံး ပရိသတ်များကို ပမာပြုပြီး စင်ကာပူ ဝန်ကြီးချုပ် တိုက်တွန်း
စီးပွားရေးသတင်းများမြန်မာ့စီးပွားရေးကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဈေးကွက်နောက်ဆုံးသတင်းများ တိုးတက်လာတဲ့ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဗီယက်နမ်လေကြောင်းလိုင်း
နိုင်ငံခြားဘဏ်ကိုးခု ပြည်တွင်း၌ ဖွင့်ခွင့်ပြု
အခွန်မဆောင်သည့် ကုမ္ပဏီ တစ်သောင်းကျော် မတ် ၂၀ နောက်ဆုံးထား မဆက်သွယ်က အရေးယူမည် Post: 2014-03-07
နိုင်ငံတကာသတင်းများအရှေ့အလယ်ပိုင်းဥရောပအမေရိကအာရှအာဖရိကနောက်ဆုံးသတင်းများ ဂျပန်နိုင်ငံက စက်ဘီး ရိုလာကိုစတာ Post: 2015-03-26
Google မှာ အလုပ်လုပ်ပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့ရင်
ဘန်ကောက်မြို့၏ ကားလမ်းမများနှင့် ယှက်ဖြာနေသော ဂုံကျော်တံတားများ
၁၀ နှစ်မက မျက်စိကွယ်ရာကနေ ဇနီးကို ပြန်မြင်ရသူ Post: 2015-03-07
ဖျော်ဖြေရေးသတင်းများအနုပညာအင်တာဗျူးရုပ်ရှင်သီချင်းဖက်ရှင်ထူးဆန်းထွေလာဗေဒင်နောက်ဆုံးသတင်းများ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အနာဂတ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့ အတွက် Yangon Women's Festival ပွဲ
စည်းစိမ်အကုန်ရင်းပြီး ရုပ်ရှင်တစ်ကားပြီးအောင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဗင်ဒီဇယ်
အသက် ၁၁ နှစ်သာရှိပေမယ့် အိုမင်းနေတဲ့ ကလေးငယ်
၀င်ငွေနည်း စုံတွဲ ၁၉၆၀ တစ်ပြိုင်နက် မင်္ဂလာဆောင်
အားကစားသတင်းများဘောလုံးတင်းနစ်(စ်)ဂေါက်(ဖ်)လက်ဝှေ့အခြားအားကစားသတင်းများနောက်ဆုံးသတင်းများ ဇီဒန်းနဲ့ ဖိနပ် သင်ခန်းစာ. Post: 2014-11-21
ယူရို -၂၀၁၆ ခြေစစ်ပွဲ ရလဒ်များ (နိုဝင်ဘာ ၁၆)
အာဂျင်တီးနား ဂိုးသမားရဲ့ အံ့မခန်းကာကွယ်မှု
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသတင်းများမိုဘိုင်းဖုန်းအင်တာနက်ကွန်ပျူတာတီထွင်ဆန်းသစ်မှုများအီလက်ထရောနစ်နောက်ဆုံးသတင်းများ စင်္ကာပူတွင် ကျင်းပသော Samsung Galaxy World Tour 2015 Post: 2015-04-08
Samsung Galaxy S6 နှင့် S6 Edge ဖန်တီးသူနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း Post: 2015-04-08
3D reality က innovation ဖြစ်လာမလား
အပြင်မှာချိန်းတွေ့တော့ မလှလို့ မိန်းကလေးကို ရိုက်သတဲ့ Post: 2015-03-13
ဈေးသင့်တင့် စတိုင်ကျတဲ့ Samsung ရဲ့ E5 နှင့် E7
ကျန်းမာရေးသတင်းများဆေးဝါးမိတ်ဆက်ရောဂါကုထုံးအလှအပရေးရာဆောင်းပါးFitness & Dietနောက်ဆုံးသတင်းများ ဖရဲသီးမှ ရရှိသော အကျိုးကျေးဇူး ၁၀ ချက်
နေ့ခင်းနေ့ဘက် ၄၅ မိနစ်တာ အိပ်စက်ခြင်းက မှတ်ဥာဏ်အတွက်ကောင်း Post: 2015-03-23
အင်္ဂလိပ်စကားပြောသည့်အခါ သင်သတိထားရမယ့် အချက် ငါးချက်
အမျိုးသမီးကို ဘယ်ဘက်မှာ ထားရခြင်း Post: 2015-03-09
စာအုပ်စင်ကဗျာဝတ္ထုတိုစာအုပ်မိတ်ဆက်ဆောင်းပါးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထွေရာလေးပါးနောက်ဆုံးသတင်းများ အိမ်မှာ စာအုပ်စင်ထားသင့်တဲ့ အကြောင်း
ခွေးများက အသက် ၂ နှစ် လူသား ကလေးနှင့် ဥာဏ်ရည်တူ
မြန်မာ့ ရိုးရား စကားပုံ - ဆီလူးခြင်းနှင့် ငတေကျန်းမာခြင်း
ဥရောပ ကာရေးဘီးယမ်းက ရေအောက် ရုပ်ကြွင်းပြတိုက်
ကလေးများကမ္ဘာကာတွန်းဉာဏ်စမ်းသိမှတ်စရာအဖြာဖြာဆေးရောင်လှလှခြယ်ရအောင်နောက်ဆုံးသတင်းများ ကမ္ဘာကျော်တို့၏ Revolution ဖွင့်ဆိုချက်များ
စက်မဖတ်တဲ့ CD / DVD များကို ငှက်ပျော်သီးနဲ့ ဖတ်အောင်လုပ်မယ်
အမေရိကန်မှာ ကြောင်တစ်ကောင်ကို မြို့တော်ဝန်အဖြစ် ခန့်အပ်ထား
စာကျက်နေစဉ် မအိပ်ငိုက်ရန် နည်းလမ်းကောင်း Post: 2014-01-27
ရန်ပွဲများ၏ အဓိက အကြောင်းအရင်း
စင်္ကာပူတွင် ကျင်းပသော Samsung Galaxy World Tour 2015 Samsung Galaxy S6 နှင့် S6 Edge ဖန်တီးသူနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း ဖရဲသီးမှ ရရှိသော အကျိုးကျေးဇူး ၁၀ ချက်
ဂျပန်နိုင်ငံက စက်ဘီး ရိုလာကိုစတာ ငွေရှိမှ ကုသိုလ်ရတာ မဟုတ်ပါဘူး
ပင်မစာမျက်နှာ ဖျော်ဖြေရေး အနုပညာ မာယာများတဲ့အလင်္ကာ ဇာတ်ကားအတွက် ပရိသတ်များကို တောင်းပန်ဟု သဉ္ဇာနွယ်ဝင်းဆို
ဖျော်ဖြေရေး မာယာများတဲ့အလင်္ကာ ဇာတ်ကားအတွက် ပရိသတ်များကို တောင်းပန်ဟု သဉ္ဇာနွယ်ဝင်းဆို
By The Voice Journal လတ်တလော Facebook လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ တွေပေါ်မှာ ဝေဖန်သံ တွေညံနေတဲ့ ဒါရိုက်တာ သီဟတင်သန်း ရိုက်ကူးပြီး နေမင်းနဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မာယာများတဲ့ အလင်္ကာ ဇာတ်ကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်များကို တောင်းပန်ပါတယ်လို့ သဉ္ဇာနွယ်ဝင်းက The Voice ကို ပြောပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေကို ဂျာနယ်များကနေရော သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင် Facebook စာမျက်နှာကနေပါ တောင်းပန်ထားပါတယ် လို့ သဉ္ဇာနွယ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ လူပြော များနေတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး "ဒီဇာတ်ကားကိုရိုက်ဖို့ စတင်လက်ခံတုန်း က သဉ္ဇာကိုပေးတဲ့ ဇာတ်လမ်းအခန်းစဉ် စာရွက်မှာတော့ Love Scene တစ်ခန်းပါ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုပုံစံမျိုး ရိုက်ရမယ်လို့ မသိခဲ့ပါဘူး။
ဇာတ်ကားစရိုက်တဲ့ ပထမဆုံး နေ့မှာပဲ ဒီအခန်းကို စရိုက်ဖို့ သဉ္ဇာကို ညဝတ်အင်္ကျီ လဲခိုင်းပါတယ်။ ဒီလိုပုံစံ ရိုက်ရမယ်လို့ သိတဲ့အခါမှာ ကိုယ်လက်ခံပြီးသား အလုပ်တစ်ခုကို ရှောင်လွှဲရာကျမှာ ကြောင့်ရော၊ ကိုယ်နဲ့အတူတူ အလုပ်လုပ်နေ တဲ့သူတွေကို Respect ထားတဲ့ အနေနဲ့ရော ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အနုပညာလောကမှာက အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နာမည်ပျက်သွားရင် ကြဉ်ဖယ်ထားကြလေ့ ရှိပါတယ်။
တက်သစ်စ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ဒီအခန်းကို မရိုက်နိုင်ပါဘူးလို့ မငြင်းရဲခဲ့ပါဘူး။ အနုပညာရှင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ကိုယ်ကျရာ ဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ရင် ပရိသတ်အားပေးမှု ရမှာပဲဆိုတဲ့ စိတ်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုဇာတ်ဝင်ခန်းမျိုး တွေကို နောင်ဘယ်တော့မှ ရိုက်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပရိသတ်တွေ ကိုလည်း တောင်းပန်ပါတယ်" လို့ သူကဆိုပါတယ်။
သဉ္ဇာနွယ်ဝင်းက ဗီဒီယိုဇာတ်ကား ၁၄ ကား ထွက်ရှိထားပြီး လတ်တလောမှာ ဒါရိုက်တာစိုးကျော်ဆန်း ရိုက်ကူးတဲ့ ပန်းသီးထဲကနံရိုး၊ ပန်းသီးထဲကဗုံး ဇာတ်ကားမှာ မင်းမော်ကွန်းနဲ့အတူ သရုပ်ဆောင် နေပါတယ်လို့ ပြောပြပါတယ်။ The Voice Journal
Copyright © 2015 ရိုးရာလေး. All Rights Reserved.